Siena မှ Saint Catherine သို့ဆုတောင်းခြင်း။ ? ကာကွယ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်းနှင့်အချစ်အတွက်
စိန့်ကက်သရင်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်း အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ Siena ၏။
၎င်းကိုကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်း၏ဆရာဝန်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများသည်၊ ထို့ကြောင့်ကာယရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊
နှစ်များတစ်လျှောက်ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်း၌ရိုသေလေးစားခြင်း ခံရ၍ သူတော်စင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသောတန်ခိုးနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
1.4 လူတစ် ဦး ၏စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်
2 Siena ၏စိန့်ကက်သရင်းအစွမ်းထက်ပါသလား
လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏ ၂၃ ယောက်မြောက်သမီးဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်သူ့ကိုနိမ့်သောလူလတ်တန်းစားလူတန်းစားမှပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုကောင်းသောပညာရေးကိုမရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းသူ ၇ နှစ်အရွယ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သူမသည်အသက် ၃၃ နှစ်တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခဲ့ပြီးသူမအား Santa de အဖြစ်ကြေငြာသူမှာဖခင် Pius II ဖြစ်သည် ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း 29ပြီလ 1461, XNUMX ။
ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို Siena ၏သီလအမြိုးသမီးတဘုန်းကြီးသောအပျိုစင်ကက်သရင်း!
အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တည်းဟူသောကြံစည်ခြင်း၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုကြံစည်ခြင်းငှါရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ။ ၊
ဘုရားသခင့်မျိုးစေ့ကိုကြဲခြင်း၊ power ၀ ံဂေလိတရားအားထုတ်ခြင်းတွင်တိုးတက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်အားထက်သန်စွာရှာဖွေခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်တာ ၀ န်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများတွင်နှိမ့်ချခြင်း၊ သမ္မာသတိရှိခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၌ဘုရားသခင်ထံတော် ၀ င် ၀ င်ရောက်ခြင်းမှရရှိသောပျော်ရွှင်မှုနှင့်သူ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အံ့ဖွယ်အမှုများမှတစ်ဆင့်သူမလိုအပ်နေသူများစွာအား ကျေးဇူးပြု၍ ၀ မ်းမြောက်နိုင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးအတွက်သခင်ဘုရား၏ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု၊ သီလရှိသောစိန့်ကက်သရင်း သင်၏မြင့်မြတ်သောကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်ဘဝ၊ ကျွန်ုပ်မိသားစု၊
ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်အပူတပြင်းလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်၏တန်ခိုးကြီးသောလက်များဖြင့်ကောက်ယူပါ။ ၎င်းကိုချက်ချင်းတက်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ထံသို့တင်ပြပါ။
ကျွန်ုပ်အားကာကွယ်ရန်နှင့်အကာအကွယ်ပေးရန်တောင်းပန်ပါ၏။ သင်၏သီလကိုတုပခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ဆူတည်းသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌တိုးပွား။ ရွေးကောက်ခံရသူများ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။
သငျသညျကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုလျှင်ဤသည် Siena ၏စိန့်ကက်သရင်းမှမှန်ကန်သောဆုတောင်းပဌနာသည်။
အီတလီနှင့်ဥရောပတို့၏နာယကအဖြစ် Santa Catalina ကယင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်သည် ငါတို့ကိုလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဘယ်ကမ္ဘာမှာနေနေပါစေ
ဆိုးယုတ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်မကောင်းဘူး သူတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပြီးလူတွေကို ml အောင်အောင်ဒီမဆိုးတဲ့အလုံးတွေနဲ့ဖြည့်စွက်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ကာကွယ်မှုအတွက်ဆုတောင်းတာကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်အနည်းဆုံးလုပ်ဖို့အကြံပြုထားတယ်။
အိုး၊ ကျွန်ုပ်၏ Santa Catalina၊ သင်မအောင်မြင်ခဲ့သောအရာများ၊ မင်းဟာငါတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများရဲ့အချိုသာဆုံးနှင့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးဆုံးသူပါ။ မင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကိုပြန်ပေးဖို့မင်းရဲ့အကူအညီတောင်းခံ ...
သင်၏နှလုံးသားနှင့်ဘုရားသခင်၊ သူ့သားယေရှုနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးလိုသူများအကြားဘုရားသခင်ကူညီပေးပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။ သင်၏လက်မောင်းကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်အားအားပေးကူညီရန်နှင့်အရာရာပျောက်ဆုံးနေသောအချိန်တွင်သက်သာရာရရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်ကမ်းလှမ်းရန်ဆန္ဒရှိသူများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်ခေါ်ဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ ိညာဉ်၌ကျွန်ုပ်နာကျင်စေသောဝေဒနာကိုသက်သာစေရန်သက်သာစေပါ။
ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်မှုနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုအတွက်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသောစိန့်ကက်သရင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကိုပြန်လည်ပေးအပ်ပါ၊
ကျွန်ုပ်ချစ်သော Catalina သည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုကောင်းချီး ပေး၍၊ ကျွန်ုပ်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်လမ်းပြခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။
ဒါကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ၊ ထိုနည်းတူ၊ ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
စိန့်ကက်သရင်းအတွက်ဆုတောင်းပါ တရားမျှတမှု လိုအပ်အချိန်များတွင်.
ဤမျှလောက်များစွာသောလူများပြန်လည်သင့်မြတ်စေနိုင်သူကို Santa Catalina
ငါ့ကိုမျက်နှာသာ ပေး၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာပါ၊ ငါ့နှလုံးသားကိုမြင့်မြတ်။ စစ်မှန်စေပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စေသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စစ်မှန်သောခံစားမှု၊ စန်တာ Catalina၊ မင်း၌တန်ခိုးများစွာရှိသောမင်းတို့သိချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးကိုပေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်သည်သင့်ထံသို့လာပါစေ။ သင်၏ကောင်းချီးကိုကျွန်ုပ်ရနိုင်မည်။ Saint Catherine ချစ်သောသူ၊ စုံလင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ el Mundo တစ်ခုလုံး
သူသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝစေရန်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်ဝစေရန်၊ သင်ကအံ့ဖွယ်ကောင်းသော Santa Santa Catalina ဖြစ်စေရန်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်အားချစ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းပိုမိုချစ်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းသောဆန္ဒများ၊ ကောင်းသောအကြံအစည်များ၊ ကောင်းသောအပြုအမူများပြုရန်၊ ကျွန်ုပ်အားအောင်မြင်စေရန်ကူညီပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
အရာရာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ ငါ့ကို ပေး၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်မှန်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသူစိန့်ကက်သရင်း, ငါ့ထံသို့လာပြီးသင့်တန်ခိုးတော်နှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ပါ။
သူတို့အားအမျိုးသမီးများ၏နာယကအဖြစ်လူသိများ သူတို့တစ်တွေရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်မပါဘဲဖြစ်ကြသည်, ဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများ။
ဘ ၀ ၌သူသည်ကြီးမားသောဉာဏ်ပညာ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ခွန်အား၊ စိတ်ကူးယဉ်ကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလိုအပ်သည့်အကူအညီများပေးရမည့်အရာရှိသည်။
ကျနော်တို့ဆီသို့ ဦး တည်ရွှေ့ပါလိမ့်မယ် လူကိုစိတ်ပျက်အားငယ်ရန်ဆုတောင်း Santa Catalina က de Siena ၏။
လူတစ် ဦး ၏စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်
လှသောအဆင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏ နေအဖြစ်လှပသော la lunaနှင့်ကြယ်ကဲ့သို့လှပသော။
သင်သည်အာဗြဟံ၏အိမ်သို့ဝင်ပြီးလျှင်၊ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ရဲရင့်စွာနေသောလူငါးသောင်းကိုငါသတ်။ ၊ ငါ့နာမကိုပဌနာပြု၏။
(ထိုသူ၏အမည်ပြောပါ) သူသည်ငါ့ကိုမြင်သောအခါငါ့ကိုရှာလိမ့်မည်။ အိပ်လျှင်၊ အိပ်ပျော်လျှင်၊ စားသည်ဖြစ်စေ၊
(ထိုသူ၏အမည်ပြောပါ သုံးကြိမ်မြောက်အောင်, ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မြေပြင်ပေါ်မှာနှိပ်),
သင်အိပ်ရန်ရှိပါက၊ သင်အိပ်မည်မဟုတ်၊ သင်စားရန်ရှိလျှင်၊ သင်မစားရ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောရန်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်မလာပါကထိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤ ဆုတောင်းပဌနာ ၎င်းသည်လူတို့၏ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ရန်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များနှင့်အတူမကြာခဏညှိုးနွမ်းနေသောအရာများကိုကောင်းကင်မှကောင်းချီးပေးသောမေတ္တာနှင့်ယုံကြည်ခြင်းလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အိမ်မှထွက်သွားသောသူ၊ အိမ်မှာထားခဲ့ပါသို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆက်ဆံရေးကို သူသည်သူပြန်ထားခဲ့သည့်အရာကိုပြန်လည်ရယူရန်အပူတပြင်းပြန်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဤအထူးဆုတောင်းခြင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်မျှခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်စေ၊ အံ့ဖွယ်အမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည်ထက်စော။ မနာလိုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာအမြဲတမ်းမေးနိုင်သည်။
အမြဲတမ်းအခွင့်ကောင်းယူပါ Siena ၏စိန့်ကက်သရင်းမှဆုတောင်းပဌနာ၏တန်ခိုး!
Santa Barbara သို့အစွမ်းထက်။ အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ဆုတောင်းခြင်း